The kasị dị ịrịba ama Universities Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > The kasị dị ịrịba ama Universities Na Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 05/12/2020)
Achọ ndị kasị dị ịrịba ama Universities Na Europe? Mgbe ahụ na-agụ na! Anyị maara ị na-ahọrọ a mahadum bụ otu ihe dị mkpa na-ahọrọ. N'ezie, onye ga-ewere echiche na-ezi ihe ma na-amụta ụlọ ọrụ na a mahadum awade mgbe ị na-ahọrọ nke na otu onye na-aga. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ a gootu mmetụta dị mma na-aga na oke. ebe a na Save A Train anyị mere ụfọdụ nke a nnyocha maka gị na weere a ndepụta nke Kasị dị ịrịba ama Universities. Ha niile na-anya isi ikpọ ije. Ụfọdụ nwere ihe ịtụnanya akụkọ ihe mere eme, ma ụfọdụ n'ime ihe e guzobere ọhụrụ mahadum na-apụta na a ndepụta. Ha na-enye a ọzọ dịkọrọ ndụ aesthetic na modernist ụlọ na art atụmatụ. Ka anyị mara ihe bụ ọkacha mmasị gị!
The University of Bologna na Italy Ẹda dị ka ụwa kasị ochie mahadum, ọ na e hiwere na 1088. Ndepụta a bụ nke Kasị dị ịrịba ama Universities na Europe, ma nke a pụrụ iwere otu n'ime ndị kasị akpali akpali mahadum ụwa. Foto n'okpuru bụ Palazzo Poggi, otu n'ime ndị isi ụlọ nke mahadum. Ọ ụlọ atọ nke mahadum ngosi ihe mgbe ochie na ihe ngosi na eke akụkọ ihe mere eme, mmewere, obstetrics, physics, na onwu. Ee, ị na-agụ na nri. Ha nwere onwe ha ngosi ihe mgbe ochie!
Ma ha na-abụghị nanị ụlọ gị kwesịrị ịga leta mgbe scoping si Kasị dị ịrịba ama Universities. E nwere ọtụtụ ụlọ n'ime mahadum na ị ga-eyiri gị kwesịrị-nleta ndepụta. A na-agụnye College of Spain, a pink, cloistered ụlọ incorporating ma Gothic na Renaissance ọcha ke ya imewe. Nakwa dị ka na-atọ ije, na mahadum bụ n'ụlọ ka a 2-hectare botanical ubi.
Olee otú Iji Nweta E Site Train?
Ruru ya Central ebe na ọdịdị ala, Bologna e mepụtara n'ime otu nke isi ụgbọ okporo ígwè iga n'ógbè nlekọta ọrụ nke ugwu Italy. Ọ bụ nnọọ dị mma-ejikọrọ na ndị ọzọ na isi Italian emmepe.
Bologna bụ 37 nkeji si Florence
2-Ọrụ Nchịkwa 20-min si Rome
2 awa si Venice
1 hour si Ferrara
A oge a elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè akara na-enye ohere na-eru Milan na mkpokọta 65 nkeji.
The ọzọ alaka nke a akara ejikọ Bologna na Rome.
akụkụ dee: Mgbe na-ewere na ịzụ ndịda si Milan, echefula enwetaghị a ghọta nke Duomo n'elu ugwu n'elu Bologna n'ebe ndịda. ọ bụ karịsịa na-akpali mgbe anyanwụ dara.
Florence na Bologna Ụgbọ oloko
The University of Rostock abụghị nanị mahadum kasị ochie na Baltic Sea Region; ọ bụkwa ndị kasị baa ọgaranya na omenala. Na N'ezie, otu nke kasị dị ịrịba ama Universities Na Europe. Dị ka ọ na e hiwere na 1419, ọ ga-anya-eme ememe ya 600th ncheta. Ọ ga-anya azụ na a ogologo omenala nke izi ụmụ akwụkwọ na-eme nnyocha na. The Gothic-imezi ụlọ, tinyere osisi-agbakọta emeghe ụzọ na ogige eme ka a pụtara ọnọdụ. Na etiti nke mahadum bụ anya-akụta isi ụlọ nke dọtara anyị ibido na-agbakwunye a ka The Kasị dị ịrịba ama Universities. ọ bụ nsogbu n'ihu a ogige na isi iyi, a zuru okè ntụpọ maka ụmụ akwụkwọ na ndị ọbịa na-eji oge ụfọdụ ekiri ọgaranya mputa nke ụlọ.
The University of Rostock mejupụtara itoolu omenala n'ahụ na onye Central interdisciplinary ngalaba na nke ndị ọkà mmụta sayensị na ụmụ akwụkwọ si niile ezi ikike iche imekota ime nnyocha na anọ bụ isi ubi:
Life, ìhè, na okwu
Ịka nká nke ndị mmadụ n'otu n'otu na otu
Ihe ọmụma – Culture – mgbanwe
The University of Rostock bụ otu n'ime German mahadum na a nnọọ iche iche nke na-achị. Ọ na-enye karịa 100 ọmụmụ: 34 imecha ya na okokporo, 56 na a eteufọk ogo, 37 (gụnyere nkụzi) ya na nyocha obodo, na 3 na a Ph.D. Ọzọkwa, Centre maka Ozizi Ọzụzụ na Educational Research bụghị naanị na ọ na-eduzi izi research ma na-arụ ọrụ na melite àgwà nkụzi ọzụzụ.
Chọrọ mara ka esi otu n'ime Kasị dị ịrịba ama Universities Na Europe? Bụla direction na ị ejegharị ejegharị si (e.g. Rostock ma ọ bụ Schwerin, Berlin ma ọ bụ Hamburg), na-ụgbọ okporo ruo mgbe i ruo Wismar n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. site n'ebe a, ị nwere ike enwetaghị a ụgbọ ala ka ụgbọ ala na-akwụsị na J.-R.-Bika-Straße site na iji ahịrị 4 ma ọ bụ G (kwupụta Ostseeblick) ma ọ bụ B-D (kwupụta Seebad Wendorf). Ọ bụ naanị a otu ije nkeji a ụgbọ ala na-akwụsị gafee ụgbọ ala ogige na Campus.
(Maka netwọk plan nke obodo ụgbọ ala ụzọ gasị, nhazi oge iheomume na ahịa, biko gaa na website nke Hanseatic obodo nke Wismar.
Berlin na Rostock Ụgbọ oloko
Hamburg na Rostock Ụgbọ oloko
Schwerin na Rostock Ụgbọ oloko
Wismar na Rostock Ụgbọ oloko
Aarhus University, Denmark Anyị ikpeazụ ikpọ Universities Na Europe
Aarhus University na emi odude ke Denmark nke abụọ kasị ukwuu obodo (Aarhus bụkwa aha obodo ahụ) na e ji ya green campus, zuru ezu na a ọdọ. The mahadum bụ ihe nlereanya zuru okè nke otú mmadụ mere owuwu na eke gburugburu ebe obibi nwere ike na-arụ ọrụ zuru okè kwekọrọ. Gosiri site isi ụlọ, zuru okè. Ọtụtụ nke ụlọ mere site Danish-atụpụta ụkpụrụ ụlọ C.F. Moller na a modernist imewe na-egosiputa na-eto eto nke na mahadum. Moller na ndị òtù ya Kay Fisker na Povl Stegmann bu maka na odo-brick ụlọ. Ha na-pụrụ iche dị ka nke ọma dị ka pụrụ iche na mahadum. Isi ụlọ kemgbe-ewere otu nke 12 kasị dị ịrịba ama ụkpụrụ ụlọ ọrụ na Danish akụkọ ihe mere eme. Otu n'ime ọtụtụ ihe mere na ọ bụ otu n'ime ndị kasị ikpọ Universities.
na n'elu 44,000 ụmụ akwụkwọ, Mahadum Aarhus bụ mahadum nke abụọ kachasị na mba ahụ. O nwere ikike anọ na Arts, Science and Technology, Health, na Business na Social Sciences.
A gazuo uwa niile orientated, na mahadum nwere mgbanwe omume na ebe na n'elu 50 oru n'ụwa nile. Nke a na-agụnye University nke Arctic, na Utrecht Network, na Nordic Center Fudan, and Nordic Centre India.
Aarhus ụgha na otu n'ime ihe ndị kasị mkpa n'ọdụ ụgbọ okporo junctions na Denmark. E nwere hour obula ọpụpụ n'ebe ugwu, ndịda, na n'ebe ọdịda anyanwụ. Si Southern na Central Europe, ihe jikọrọ ndị via Hamburg / Flensburg. Travel oge site Hamburg na Aarhus bụ mkpokọta awa ise. Site Eastern mba Europe zụọ njikọ Aarhus gaa via Poland na Copenhagen. Aarhus nwere hour obula ọrụ na site na Copenhagen. Oghere nke ọwara n'okpuru Great echebe ka shortened na njem site otu hour. The njem ugbu a na-ewe atọ na ọkara awa. E nwere ọtụtụ kwa ụbọchị njikọ Sweden, Germany, na ndi fọduru nke Europe.
Ụgbọ oloko na-aga Aarhus n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-ahapụ Copenhagen Airport hour obula. The price bụ banyere DKK 410 maka otu ụzọ na tiketi (tinyere oche ndoputa).
Ị chọrọ Embed anyị blog post “The kasị dị ịrịba ama Universities Na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspectacular-universities-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)